Usuthembele kuNkulunkulu umndeni kaMgilitsha - Ilanga News
Home Izindaba Usuthembele kuNkulunkulu umndeni kaMgilitsha
Usuthembele kuNkulunkulu umndeni kaMgilitsha
Uthi ubengawadli amaphilisi abewanikwa wudokotela, waze wagula kakhulu
UMNU Zihogo “Mgilitsha” Nhleko okuthiwa sekuthenjwe uThixo ngempilo yakhe emuva kokuba wayeka amaphilisi awanikwa esibhedlela ngenxa yokugula. ISITHOMBE: INQOLOBANE YELANGA
USUBEKE ithemba kuNkulunkulu umndeni wowayengumkhuzi wamabutho kaZulu, okuthiwa isimo sakhe silokhu siqhubekile ngokungabi sihle esibhedlela njengoba wabuyela khona emuva kokuba ukugula kwamqinisa ngenxa yokungawadli amaphilisi ayenikwe wona.
UMnu Zihogo “Mgilitsha” Nhleko, kuthiwa kwatholakala ukuthi uneTB yamathambo, esidale ukuthi ithambo lasehlombe liphelelwe wuqwanga (cartilage), okwenza amathambo agudlane kabuhlungu.
UMnu Seth Nhleko ongumfowabo kaMgilitsha, uthi njengengxenye yokumelapha, wanikwa amaphilisi eTB adliwa izinyanga eziwu-6.
“Umfowethu kwathi uma efika ekhaya, wakhala ngokuthi la maphilisi amphatha kabi, wanga-be esaqhubeka nokuwadla, kanti usezithintela iziqandu, ukugula kwadloba waphindela esibhedlela isimo sakhe sesisibi kakhulu, eshodelwa nawumoya.
“Wafika esibhedlela bamlekelela ngemishini ukuphefumula,” kusho yena. Uthi kumanje ungaphansi kweso lodokotela, futhi bathi bazoqhubeka bamgcine ukuqinisekisa ukuthi amaphilisi uwadla ngendlela efanele.
“Sibonga kakhulu ukwesekwa esikutholayo kwabasendlunkulu (kaZulu) namabutho abesebenzisana nawo, abalokhu bebuza ukuthi isimo sakhe sinjani.
“Yize engakuthandi ukubonwa, kodwa imikhuleko esiphiwa yona iyasithobisa kakhulu. Sinethemba lokuthi lesi siwombe sokugula sizodlula abuye aqhubeke nempilo yakhe.
ukuthi umfowethu kalukamtholi
ukhuvethe ngoba ubehlale ethi akalwesabi. Ngesikhathi kutsha-lwa ingonyama (iSilo uZwelithini), wayethi akalwesabi futhi uyojabula uma lumthatha,” kusho yena.
Kuzokhumbuleka ukuthi uMnu Nhleko wahlabeka emuva kancane nje komsindo owasuka kade eha-mba namabutho beyokweseka uMnu Jacob Zuma eNkandla, engakaboshelwa icala lokudelela inkantolo.
Washushiswa yindlunkulu ngalokho, imsola ngokuthi ufaka ubukhosi kwezepolitiki ngokuhola amabutho egqoke imvunulo yesizwe. UNdunankulu kaZulu, iNkosi Mangosuthu Buthelezi, wamsola uMnu Nhleko ngalesi senzo, wathi usenze engagunyaziwe yindlunkulu futhi engabikelanga muntu.
Emuva kwalokho kwahlangana
izinduna zasoSuthu zanquma ukuthi ahoxiswe esikhundleni soku-khomoza amabutho.
Wazama ukuyoshweleza ngenkomo endlunkulu ngokusolwa kwakhe, wajikiswa kwaze kwaba kabili, kwathiwa kusamele ayofundiswa inhlonipho.
Previous articleKubatshazwa ukubulawa kwesalukazi ngesihluku
Next articleIsamisiwe eyokushayela iSilo indishi